अन्तरिक्षमा १३ हजार भूउपग्रह पठाउने तयारीमा चीन - TokhaLive
एजेन्सी/चीनले अन्तरिक्षमा १३ हजार भूउपग्रह पठाउने तयारी गरिरहेको छ। China Megaconstellation: इन्टरनेट सेवाहरू प्रदान गर्न पृथ्वीको लम्बाइ र चौडाइलाई समेट्ने हजारौं उपग्रहहरूको नेटवर्क हो।
के चीनले अब विश्वमा आफ्नो शक्ति बढाउन जासुसीको सहारा लिइरहेको छ? के चीनले आफ्नो भूउपग्रह जासुसीका लागि प्रयोग गर्ने ठूलो योजना बनाएको छ? चीनले मेगा कन्स्टेलेसनमा काम सुरु गरेको मिडिया रिपोर्टपछि यी प्रश्न उठेका छन् । यसअन्तर्गत एक–दुई होइन १०–१२ पूरै १३ हजार भू–उपग्रह अन्तरिक्षमा छोडिनेछन् । चीन सरकारले यसको ठेक्का निजी कम्पनीलाई दिएको छ ।
कम्पनीले यी अन्तरिक्ष यान 5G सेवाका लागि छाड्ने बताए पनि अमेरिकालगायत अन्य पश्चिमी देशले यसलाई जासुसीको हतियार भनेका छन् ।
डेली मेलको रिपोर्ट अनुसार चीनको स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन अफ साइन्स, टेक्नोलोजी एन्ड इन्डस्ट्री फर नेशनल डिफेन्स (SASTIND) ले साना उपग्रह प्रक्षेपण गर्ने योजना बनाएको छ। प्रतिवेदनमा दाबी गरिएको छ कि यी उपग्रहहरूको सहयोगमा चीनले पृथ्वीको अधिकांश भागलाई निगरानी गर्न सक्नेछ।
यद्यपि चिनियाँ सरकारले यसको पछाडिको उद्देश्य इन्टरनेट सुविधा सुदृढ गर्ने बताएको छ । रिपोर्टमा थप भनिएको छ कि नेटवर्कले के कभर गर्नेछ र कसरी काम गर्नेछ भन्ने बारे धेरै जानकारी उपलब्ध छैन। यद्यपि, यसको प्रारम्भिक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रमा 5G नेटवर्क सेवाहरू सुदृढ पार्नु हो।
के हो चीनको मेगा कन्स्टेलेसन योजना?
चीनको योजनाअनुसार स्पेसएक्स–स्टारलिङ्क कम्पनीका स्याटेलाइटजस्तै १२९९२ स्याटेलाइटले तल्लो पृथ्वीको कक्षमा परिक्रमा गर्नेछन् । यसलाई ‘मेगाकोस्टेलेसन’ नाम दिइएको छ। तिनीहरूको दायरा पृथ्वीको सतहबाट ४९८.८९ किलोमिटर देखि ११४४.२४ किलोमिटरको बीचमा हुनेछ। डेली मेल रिपोर्टले दावी गरेको छ कि चोङकिङमा विकास कार्य सुरु गर्न केही फर्महरूलाई ठेक्का दिइएको छ।एक ‘मेगाकन्स्टेलेसन’ इन्टरनेट सेवाहरू प्रदान गर्न पृथ्वीको लम्बाइ र चौडाइ कभर गर्ने हजारौं उपग्रहहरूको नेटवर्क हो।